Yintoni omele uyazi malunga neNzuzo yokuVimba kunye ne-Deadlock | Ezezimali
Umda weNzuzo kunye noMqobo
USusana Maria Urbano Mateos | | Abashishini, iinkampani
Ngokuqinisekileyo sele sivile malunga nayo Umda wokufumana inzuzo kunye nokuvalwa kweenkampani okanye amashishini Kodwa yintoni le ibreakeven okanye deadlock? Isekwe phi? Ngaba ibalulekile ngokwenene kwinkampani? Inokubalwa njani? Yenzelwe ntoni? Ngeliphi ixesha ekufuneka ndiyenzile? Lonke eli nqaku siza kuchaza inyathelo ngenyathelo ukubaluleka koku kubalwa, ukuba kulula kangakanani kunye nezibonelelo ezizisa kwiinkampani okanye kumashishini.
Yonke into ngendlela eqondakalayo kwaye ngaphandle kokungena kakhulu ukuze kube lula ukuyiqonda kwaye uyenze, ngakumbi kubantu abaqala okanye abanenjongo yokuqalisa inkampani okanye ishishini.
Ke ngaphandle kokuqhubela phambili masiqale liqonde eli gama lisetyenzisiweyo kunye nokubala kwaye iluncedo kwiinkampani.
Kwiinkampani ezininzi, nokuba zincinci okanye ziphakathi, ixabiso limiselwe ukuba kungenxa ye- ukubalwa kweemveliso kwisitokhwe kunye nokuthengiswa, Ngale nto, iindleko ezenziweyo ziyahlawulwa, oko kukuthi, oko kwakutyaliwe ngaphambili yile nto ibizwa ngokuba ukuvalwa okanye ukuphulwa; Ngamanye amagama, sisixa sentengiso esenziweyo kwaye ngale ndlela kwakungekho lahleko okanye nzuzo, oko kukuthi, oko kwakusele kutyalwe imali kwafunyanwa nje.
Isiphelo okanye indawo yokuqhekeka Sisambuku sento oyifakileyo okanye ipesenti yentengiso elingana nenani lexabiso elimisiweyo; Ngaphezulu kwelo xabiso, le ngeniso ingenayo iya kugubungela ixabiso elisisigxina kwaye enye iya kunika izibonelelo ngendlela efanayo, ukuba zingaphantsi kwayo, ziya kukhokelela kwilahleko kutyalo-mali.
1 ITHETHA UKUTHINI INXALENYE OKANYE UKUFA KWENGCACISO YOKUFA?
2 ZIYIPHI IINDAWO ONOKUZINCEDA OKANYE IZIBONELELO ZAKHO?
3 Imida yokufumana inzuzo okanye inqaku lokufa:
4 NDIYIBALA NJANI INDLELA YOKUXHUMELA OKANYE UKUFA?
5 Amaxabiso ezinto ezithengiswayo.
ITHETHA UKUTHINI INXALENYE OKANYE UKUFA KWENGCACISO YOKUFA?
Eli gama lisetyenziswa ngokubanzi kuqoqosho Umda wenzuzo, ukungathathi hlangothi okanye inqaku lokophuka Isuselwe kwisifinyezo sayo kwisiNgesi BEP (Break Even Point) kwaye ngamagama alula bubuncinci ubuninzi obuthengisiweyo beeyunithi kwinkampani yethu ukugqiba ngenzuzo zero. Ngamanye amagama, kuxa ixabiso elipheleleyo elichithwe lifana nengeniso iyonke evela kwinto ethengisiweyo.
Ngona mvuzo uphantsi we ukuthengisa kunye nemveliso ubuncinci iya kuba yimveliso enenzuzo kwishishini, ukuba yonke into evelisiweyo iyathengiswa; kuba ukuba kukho imveliso kodwa akukho ntengiso, kuyacaca ukuba ayizukubakho ingeniso yeshishini okanye yenkampani; Ngamanye amagama, kuya kubakho kuphela iindleko zokugcina.
Ukuhlela inkampani enenzuzo okanye engenzi nzuzo, inani leemveliso elizithengisayo kufuneka lihlalutywe kwaye ingaba zonke ziyanceda ukubonelela ngokulunga ngokwahluka kwephothifoliyo yemveliso evelisiweyo. Kwelinye icala, ukuba imeko yenkampani kukucaciswa kwenqaku elinye kuphela okanye imveliso, kugqityiwe kwelokuba ifikile indawo yokuqhekeka okanye ukuvalwa komda.
Ngamanye amagama ukuqonda ngcono; Umda wenzuzo okanye isiphelo esifileyo bubungakanani beemveliso okanye iinkonzo ekufuneka siyithengisile ukuze sikwazi ukuhlawula zonke iindleko zethu ezinzileyo okanye eziguquguqukayo esizityalayo ukwenza le mveliso ukuba ithengiswe. Ukuchazwa ngenye indlela kukuba umda apho siqala khona ukufumana oko kutyalwe kwishishini kwaye siqala ukuvelisa imali ngeemveliso zethu.
ZIYIPHI IINDAWO ONOKUZINCEDA OKANYE IZIBONELELO ZAKHO?
Enye ye Izinto eziluncedo ngexesha lokuphumla okanye lokuvala kukunika inkampani ingxelo malunga okanye malunga neshishini malunga neengozi okanye umngcipheko oko kuye kwahluka kubungakanani bemveliso; Ukongeza, kuyanceda ukunika umfanekiso obanzi kwaye ucace gca weziphumo ezenzekayo ekunyukeni kwexabiso elimiselweyo; Ukongeza, iyasinceda ukuba sithathe isigqibo ngotshintsho oluya kwenziwa kwiinzuzo ezinkulu, njengokunyuka kwexabiso okanye indleko kwiimveliso ezivelisiweyo.
Imida yokufumana inzuzo okanye inqaku lokufa:
Ukufezekiswa kwentengiso akuhambelani, ke xa omnye ehlupheka omnye komnye, oku kuyakuchaphazela inqanaba loko sele kukho.
Ubungakanani bezinto ezithengisiweyo ziya kuhlala zixhomekeke kwixabiso lentengiso.
Ixabiso eliguqukayo linokubandezeleka ngenxa yokunyuka okanye ukwehla, ke kufuneka zihlelwe ngokwexesha elicwangcisiweyo.
Ukuba ubungakanani bemveliso bukhulu, iindleko aziyi kuhlala zihlala zikhona kwaye ziya kunyuka.
NDIYIBALA NJANI INDLELA YOKUXHUMELA OKANYE UKUFA?
Ukubala umda osikiweyo okanye umqobo wenzuzo, ngamanqaku ama-3 kuphela afunekayo malunga nenkampani yethu:
1. Ixabiso lilonke lenkampani yethu okanye ishishini.
2. Amaxabiso ezinto ezithengiswayo.
3. Ixabiso eliguqukayo leyunithi nganye sele lithengisiwe.
Ixabiso lilonke lenkampani yethu okanye ishishini.
El Ixabiso elisisigxina okanye ixabiso lelo layo yonke into eza kutyalomali okanye ihlawulwe Ke iyafuneka ukulungiselela imveliso oza kuyithengisa, enjengokurenta kwepropathi, intlawulo kubasebenzi, umbane, umnxeba, iinkampani zeinshurensi, ezothutho, ipetroli yothutho, njl. Kubalulekile ukuba uthathe ingqalelo nganye nganye kuzo ukuze uqikelele ixabiso elisisigxina ngokufanelekileyo.
Amaxabiso ezinto ezithengiswayo.
Elinye ixabiso eliguqukayo okanye ixabiso ngu Ixabiso lokuthengisa ukuba uthengisa kuphela imveliso enye Kulula kuba kuya kufuneka usete enye. Kodwa amaxabiso aqhelekileyo aphathwa ngento nganye okanye imveliso nganye, ebizwa ngokuba lixabiso lentengiso eliphakathi; kodwa kwelinye icala, ukuba inkampani yakho sele inkulu kwaye isungulwe kwaye ineemveliso ezininzi kunye neenkcazo zezi zinto, siya kuthetha Ukuqhekeka okanye ukuvalwa kwaye kubalwa makwenziwe kulayini ngamnye wale migca yeshishini.
Ixabiso eliguqukayo leyunithi nganye sele lithengisiwe.
Inqaku lokugqibela esilifunayo lixabiso eliguqukayo yeyunithi nganye okanye umndilili weendleko eziguquguqukayo apha zingena kuyo yonke into echithwe kwishishini, izinto zokwenza imveliso okanye iimveliso ezenziweyo kwaye kuxhomekeke kubungakanani obenziwe zezi, kuba Oku kuchazwa njengexabiso eliguqukayo kuba kuya kuxhomekeka kubungakanani obuzakwenziwa, oko kukuthi, ukuba senza kakhulu, ubungakanani buya kuba buphezulu, kodwa ukuba senza kancinci, ubungakanani buya kuba buncinci, nokuba imveliso ukuthoba okanye ukwanda; isiphumo sako konke ukubala iya kuba linqaku lesithathu. Kubalulekile ukukhumbula ukuba oku kubalwa kuyakwenziwa ngaphandle kombane, imivuzo, i-inshurensi, irente yendawo kunye nayo yonke into esele iqatshelwe kwinqanaba lokuqala esizihlela njengenkcitho esisigxina.
Ukufumana umda wegalelo kufuneka senze oku kulandelayo:
Thabatha ixabiso lento oyithengisayo, thabatha, ixabiso eliguqukayo leyunithi nganye.
Ukubalwa komda wenzuzo okanye kwiziko elifileyo.
Ukwenza ukubalwa komyinge wenzuzo okanye iziko elifileyo kufuneka senze ukwahlula, ixabiso lilonke phakathi komda weyunithi yegalelo echazwe apha ngasentla; oko kukuthi:
Ukwahlula ixabiso lilonke ngomda weyunithi yegalelo kuya kubangela umda wenzuzo.
Le iya kuba yindawo oza kuqala kuyo ukwenza inzuzo.
Esi siphumo siya kuba umyinge wenzuzo okanye umqobo osikiweyo ekufuneka siwenze inyanga nenyanga, unyaka okanye usuku, (njengoko kufanelekile ngakumbi okanye kufanelekile kwinkampani) ukuze siqale ngenzuzo okanye izibonelelo kuba siyakuyazi ngokuqinisekileyo ixabiso lilonke kunye nexabiso eliguqukayo leyunithi nganye ethengisiweyo, eya kuthi isinike ulawulo ngakumbi kunye nombutho zinezibonelelo ezinkulu.
Oku kubalwa yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zenziwe; Ke ukuba unengqondo yokuseka ishishini okanye inkampani, kuyakubaluleke kakhulu ukwenza njalo, ngale ndlela unokuseta iindawo zentengiso ukuze ukwazi ukufezekisa lo mqobo wenzuzo ngokukhawuleza kwaye iya kuba yenye Eyona nto ibaluleke kakhulu kuwe yokuseka ifayile ye- isicwangciso sokusebenza ekufuneka uyinikezele kwibhanki.
Ifomula ekuchazwe ngayo ngasentla yile ilandelayo:
Qc = CF / (PVu - Cvu)
Qc = Umda wokufumana inzuzo okanye ukuvalwa kwexesha, eli linani leeyunithi ezenziwe kwaye zathengiswa ukukhokelela kwinzuzo zero.
I-CF = indleko esisigxina okanye ixabiso lilonke.
PVu = Ixabiso lentengo yeyunithi.
I-CVT = Iindleko eziguquguqukayo zizonke.
I-CVu = Icandelo leendleko eziguqukayo.
B ° = Izibonelelo.
Mna = Ingeniso.
C = Iindleko zizonke.
Ngendlela elula kwaye ngolwimi olucacileyo sichazile ukuba yintoni i Indawo yokuqhekeza kunye nokuvalwa kweenkampani okanye amashishini kunye neenzuzo zazo. Ngumcimbi wokulungiselela, ukucwangcisa kunye nokuqikelela zonke iindleko ezenziwayo kwinkampani okanye kwishishini, kunye nokugcina irekhodi lazo ukuze ukwazi ukubala yonke imihla, ngeveki, ngenyanga okanye ngonyaka ngokweemfuno ( nangona kuyacetyiswa yenze njalo ngenyanga).
Siyathemba ukuba eli nqaku belikuthanda kwaye linceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » Abashishini » Umda weNzuzo kunye noMqobo
Imithetho esisiseko kutyalo mali
Uphengululo lwebhanki yaseYurophu, ukuthenga ithuba?